Juventus oo kaga horreysa Real Madrid loollanka loogu jiro Pogba & qorshe cusub oo ay Juve la timid! – Gool FM
(Manchester) 07 Luulyo 2019. The Sunday Times ayaa ku warrameysa in kooxda Juventus ay hadda diyaar la tahay in lacago fara badan ay u adeegsato saxiixa Paul Pogba, xilli Real Marid ay la tacaaleyso lacagaha Manchester United ay xiddigan ku dooneyso iibkiisa.
Wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska waxa ay sheegayaan in Bianconeri ay dadaal walba u sameyn doonto sidii ay dib ula soo saxiixan lahayd xiddiggeedii hore ee Pogba, kaasoo €105m iyo gunnooyin ugu biirray United sanaddii 2016.
Wakiilka xiddiggan Mino Raiola ayaa caddeeyay in ku guuleystaha Koobka Adduunka uu isaga tagayo Manchester United, waxaana 26-jirkaan lagu soo warramayaa inuu iska diiday ka qayb qaadashada tababarka kooxda ee kullamada isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub.
The Old Lady ayaa hadda diyaar la ah lacag dhan €134m, iyagoo maankooda ka saarray qorshihii ku aaddanaa in xiddigo ay u adeegsadaan iibka kubbad qaabeeyahan.
Kooxda reer Italy ayaa suuqa xagaagan gacanta ku dhigtay Aaron Ramsey iyo Adrien Rabiot, waxaana ay labada laacib ee khadka dhexe ka ciyaara ku heshay qaab bilaash ah, sidaas oo ay tahayna waxa ay doonayaan inay Pogba safkooda kusoo daraan, si khad dhexe awood badan u helaan.
Real Madrid iyo Juventus ayaa ah labada koox ee ku dagaallamaya Pogba la saxiixashadiisa, waxaana labada kooxba ay doonayaan in ay siyaabo kala duwan adeegsadaan si ay u helaan adeeggiisa.